Zimbabwe - Endurance Safaris
The name "Zimbabwe" is based on a Shona term for Great Zimbabwe, an ancient ruined city in the country's south-east whose remains are now a protected site. There are two theories on the origin of the word. Various sources hold that the word is derived from dzimba-dza-mabwe, translated from the Karanga dialect of Shona as "large houses of stone" (dzimba = plural of imba, "house";mabwe = plural of bwe, "stone"). The Karanga-speaking Shona people are found around Great Zimbabwe in the modern-day province of Masvingo. Archaeologist Peter Garlake claims that "Zimbabwe" is a contracted form of dzimba-hwe which means "venerated houses" in the Zezuru dialect of Shona, and is usually applied to chiefs' houses or graves.
Zimbabwe was formerly known as Southern Rhodesia (1923), Rhodesia (1965), and Zimbabwe Rhodesia (1979). The first recorded use of "Zimbabwe" as a term of national reference was in 1960, when it was coined by the black nationalist Michael Mawema,whose Zimbabwe National Party became the first to officially use the name in 1961. The term Rhodesia—derived from the surname of Cecil Rhodes, the primary instigator of white colonisation of the territory during the late 19th century—was perceived as inappropriate because of its colonial origin and connotations. According to Mawema, black nationalists held a meeting in 1960 to choose an alternative name for the country, and the names Machobana and Monomotapa were proposed before his suggestion, Zimbabwe, prevailed. A further alternative, put forward by nationalists in Matabeleland, had been "Matopos", referring to the Matopos Hills to the south of Bulawayo.